Inkampani yeSemalt kunye neenkonzo zayo
Unayo iwebhusayithi, kwaye ngokuqinisekileyo ufuna ukukhuthaza indawo yakho, kwaye uyazibuza ukuba yeyiphi na indlela yokusebenzisa okanye yeyiphi ehlengahlengiswe ngokukodwa kwiwebhusayithi yakho? Sukuba nexhala; sikulungiselele yonke into.
Ewe, injongo yakhe nawuphi na umnini weshishini kwi-Intanethi kukuphucula indawo yakhe kwindawo yakhe kumaphepha iziphumo zokukhangela. Ubume bewebhusayithi buthathwa njengento elungileyo xa ibekwa kwiphepha lokuqala leziphumo zokukhangela. Kwaye oku akunakwenzeka ngaphandle kweendlela ze-SEO.
Ke, unale nto engqondweni, uSemalt uphuhlise iinkonzo ezilungileyo kuzo zonke iiwebhusayithi: I-SEO (ukukhangela injini yokukhangela) kunye noHlaziyo lweWebhu. Ukongeza, uSemalt ubonelela ngamaphulo amabini e-SEO, anjenge-AutoSEO kunye ne-FullSEO.
Kodwa ngaphambi kwalo lonke olo lwazi, masixelele malunga nento uSemalt; Yintoni kwaye kutheni uSemalt esenza. Kwaye ezinye izinto ezininzi malunga noSemalt. Masihambe!
Yasekwa ngoSeptemba wama-2013, iSemalt yinkampani yanamhlanje, ekhula ngokukhawuleza ye-IT. Ikomkhulu layo likwisiKyiv, eUkraine. Njenge-arhente epheleleyo yedijithali, sinika oosomashishini, ii-webmasters, abahlalutyi, kunye neengcali zokuthengisa ngeendlela ezintsha zokusebenzisa umkhankaso wewebhu ngalo naluphi na uhlobo lweshishini ngokufanelekileyo.
I-Semalt idityaniswa liqela leengcali zokuyila, ezinetalente, ezinamandla kunye nezishukumisayo ezizise iiprojekthi ezininzi ze-IT ebomini. Sele sineminyaka elishumi siphucula izakhono zethu kwaye sinokungqina ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ngamnye wethu uyinkosi yokwenyani kwezorhwebo.
Imizamo yethu yokudibana yenze enye yeenkonzo zokuqala kunye neenkonzo zewebhu ezintsha. Kwaye sinelunda ukuyazisa kuwe namhlanje. Ngenxa yale teknoloji kunye noncedo lwethu, uya kukwazi ukuqaphela amandla apheleleyo esiza sakho.
Emva kweminyaka emininzi yokusebenza kunye nohlalutyo, sinolwazi olupheleleyo malunga noko kufuneka kwenziwe, nini, njani kwaye njani. Injongo yethu kukukunceda ukuba ufike kwiindawo eziphakamileyo, zombini kuGoogle nakubomi bakho. Sebenza nathi kwimpumelelo eqinisekisiweyo.
Njengoko ubona, sinyani kwaye sizimisele ukusebenza nawe nangaliphi na ixesha lemini okanye ebusuku!
Ngoku, njengoko usazi ngakumbi malunga neSemalt , masiqhubekeke kwizinto esizibonayo njengeenkonzo.
Yintoni kwaye kutheni uSemalt esenza.
Yintoni esinokuyenza? Sithatha ishishini lakho ukuya kwinqanaba elilandelayo! Sivula iindlela ezintsha zokuthengisa kunye nokukunceda ubetha ukhuphiswano. I-Semalt ikunikezela ngeenkonzo ezilungileyo ezizezona zibalulekileyo ekubonakalisweni kwewebhusayithi yakho, ezizezi: i-SEO kunye noHlaziyo.
Ke, kuya kufuneka kuqatshelwe ukuba itekhnoloji ye-SEO yeyona ndlela enoqoqosho neyisebenzayo yokwandisa abaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye nentengiso. Ke, uSemalt uzibophelele ekuphuculeni ukubonakala kwesiza sakho kunye nokubeka iwebhusayithi yakho kwi-TOP kaGoogle. Iindwendwe ezininzi - imali engakumbi! Ke uSemalt makahambe nawe kwiinkonzo eziphambili:
Isebenza njani inkqubo yokukhangela i-injini yokukhangela?
Njengayo nayiphi na into enokwenza ukuba uzuze imali eninzi, i-SEO inokuba yinkqubo enzima.
Ewe, unokukhangela amagama aphambili kunye nokwenza ii-tag zeMETA ezenziwe kakuhle kwi-SEO usebenzisa izixhobo zefreeware, emva koko uhlale emva kwaye ulinde ukuba umlingo wenzeke. Nangona kunjalo, oku akuyona indlela iziphumo ezilungileyo ze-SEO ezifikelelwe ngayo.
Eyona ndlela iqhelekileyo yokwenza oku kukuqesha iingcali ezisebenza ngokuzimeleyo. Nangona kunjalo, awukwazi ukuba ngaba banokuqinisekisa ngokusebenza okugqibeleleyo.
Enye indlela, kwaye mhlawumbi yeyona ibhetele kwabo batsha, kukufumana iarhente yokwenza i-SEO kwishishini lakho. Banokubonelela ngenqanaba elifanelekileyo langaphakathi nangaphandle lentsebenzo, into eyonwabisa kakhulu yiGoogle.
Ukusebenza kunye nearhente enjalo, uya kukhokhelwa kuwo onke amabakala e-SEO yokwenyani:
Igama eliphambili (s) Uphando: Onke amagama aphambili awayi kwenziwa alingane. Abanye abasokuze basebenzele iwebhusayithi yakho, ngelixa abanye besebenza ngokumangalisayo. Esi sesona sizathu sokuba babe bakhethwe ngobulumko.
Ukusebenza ngobuchwephesha : Eli nqanaba lobuchwephesha kukuba ilungile njani indawo yakho ukuba "ihlaziywe" kwiinjini zokukhangela. Inefuthe ngqo kumathuba akho okufumana uxabiso lwabo.
Ukusebenza kwangaphandle: Ukusebenza kwangaphandle okanye amakhonkco okwakha. Imalunga nokufumana ezinye iilinki kwiwebhusayithi yakho. Uninzi lwee-SEO zibhekisa kulo njengemqolo yesicwangciso se-SEO, kwaye zibonakala zilungile (siza kubuya kamva).
Ukuphuhliswa kokulandela : Qhubeka uzama ukuphucula iwebhusayithi yakho yeendwendwe. Ukuba bayayithanda, iinjini zokukhangela ziya kwenza okufanayo.
Ukususela ngoku kuye phambili, lonke ishishini elikwi-intanethi kufuneka lenze ezabo ii-webhusayithi zeejini zokhangelo ukuya kwinqanaba elingaphezulu okanye elincinci. Ukuba, ewe, bayakhathazeka ngengeniso yabo kunye nokuzinza kwabo.
I-SEO yonke kungenxa yokuba iqhuba i-organic web traffic ngokuya kwiwebhusayithi yakho kwaye "iseka isiseko" ukomeleza ubukho bakho kwi-intanethi.
Ukunqongophala kolwazi kukhokelela ekugxothweni kweshishini lakho. Hlala unolwazi kwaye ulawula ishishini lakho! Yonke imihla, sikunika idatha yohlalutyo lwenkqubela phambili.
Yonke imihla, sihlalutya indawo ekubekweni kuyo indawo kwaye sijonge inkqubela yabo. Ewe, uSemalt uqokelela ulwazi kwabo bakhuphisana nabo, ngokuqinisekileyo ukuba uthatha isigqibo sokujonga iisayithi zabo.
Ngokungafaniyo nezinye iisayithi, sihlaziya isikhundla sakho rhoqo, sikunika ithuba elikhethekileyo lokulandela isikhundla se-intanethi ngalo naliphi na ixesha losuku kwaye ubone utshintsho lwamva nje.
Lonke uhlalutyo luziswa kuwe ngengxelo yohlalutyo eneenkcukacha, eguqulweyo kwifomathi yePDF onokuyikhuphela kwindawo yakho. Ingxelo ingathunyelwa kwidilesi ye-imeyile ebonisiweyo. Oku kukunika umbono ocacileyo ngenkqubela yakho.
Njengombandela, ukulwela ukuza eqongeni kuGoogle kubalulekile. Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukugcina isikhundla sakho phezulu ngonaphakade, kuba abakhuphiswano bakho banigxotha njengengonyama elambileyo. Ukukuthintela ukuba ungaweli kulo mgibe, setha ii-analytics zethu zewebhu.
Ewe, i-analytics yethu yewebhu yinkonzo yohlalutyo lobuchwepheshe kwiinkampani zewebhu ezivula umnyango kumathuba amatsha okubeka iliso kwimarike, ukujonga isikhundla sakho kunye nabo bakhuphisana nabo kunye nedatha yokuhlaziya ishishini.
Yaziswa. Qala ukusebenzisa i-analytics yethu kwiwebhu ngoku!
Iingcebiso zamagama aphambili: Sikunceda ukhethe awona magama afanelekileyo orhwebo.
Imbali yezithuba: Jonga kwaye uhlalutye indawo yamagama akho aphambili ngexesha.
Indawo yezikhundla: Ukubeka iliso mihla le kwindawo yakho kwinkqubo yenjini yokukhangela.
UkuKhangela kuKhuphiswano: Phanda kwaye uhlalutye indawo okhetha kuyo okhuphisana nayo.
Ulawulo lweshishini lakho: Olu lwazi lohlalutyo lubonisa izinga lokuthandwa kwakho, ekuvumela ukuba ube nomgaqo-nkqubo wokubambisana onobuchule.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi: Uhlalutyo olupheleleyo lokuthobela indawo yakho kunye nophuhliso lweemveliso ze-SEO.
Yeyiphi imikhankaso ye-SEO uSemalt anikezela ngayo?
Njengoko besitshilo, uSemalt unikezela ngemikhankaso emibini ye-SEO, njenge-AutoSEO kunye ne-FullSEO. Makhe sikuxelele ngabo ngoku!
Ngapha koko, eli phulo lenzelwe abantu abafuna ukwandisa ukuthengisa kwabo kwi-Intanethi ngaphandle kokuqhelana ne-SEO okwangoku, kwaye abafuni ukubeka imali eninzi ngaphandle kokufumana iziphumo. Ke amaphulo e-AutoSEO lelona phulo lilungileyo kuwe. Khangela ukuba kutheni.
Kutheni ufuna i-AutoSEO?
Iphulo le- AutoSEO sele liyibonakalisile indawo ezininzi, ke musa ukwenza okungathandekiyo kwindawo yakho. Fumanisa ezinye iziphumo ze-AutoSEO:
Yonke into ibandakanyiwe kweli phulo, I-AutoSEO ibandakanya:
Ukukhetha eyona magama afanelekileyo
Ukwakha amakhonkco kwiindawo zesiza
Ngoku lixesha lokuba uqale ukusebenza kwe-SEO kunye nokuphucula umgangatho wakho weGoogle nge-AutoSEO.
Ukukhethwa kwegama eliphambili lokukhuthaza i-SEO
Ukwaziswa kwephulo lokwakha ikhonkco
Inkxaso kumphathi wakho
Ukukhuthaza i-SEO kuyo nayiphi na indawo kunye nolwimi
KHETHA ISICWANGCISO SOKUFAKWA KWEENJONGO ZAKHO, uSemalt unonyaka omnye, inyanga ezi-6, inyanga ezi-3, kunye nokubhaliselwa kwenyanga e-1 , kuba uSemalt uvumelana nalo lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
I-FullSEO , yindlela ephambili yokujoyina i-TOP kaGoogle. Ewe, kubandakanya uluhlu lwemisebenzi ekuqinisekisweni kwangaphakathi nangaphandle kwendawo yakho, ikunika iziphumo ezilungileyo ngexesha elifutshane kakhulu.
Ukufikelela phezulu kuGoogle, udinga ixesha kunye nezixhobo. Nangona kunjalo, siphuhlise ubuchule obuphambili be-SEO ukuvumela ukuba unyuse abaphulaphuli, unxibelelwano lokuhamba kweemoto, kunye nokuthengisa iwebhusayithi yakho ngexesha elifutshane elinokwenzeka kunye ne-FullSEO: ZAMA NGOKU!
Ke, ungathandabuzeki, yenza umkhankaso wakho we- FullSEO ngoku kwaye usendleleni eya kwi-TOP kaGoogle!
I-FullSEO liphulo elipheleleyo nelisebenzayo lokunceda ishishini lakho ukuba likhule elona xesha lifutshane kunokwenzeka ukuba landise abaphulaphuli bewebhusayithi yakho benqanaba elincinci le-SEO:
Nge-FullSEO, ufumana ntoni?
Iziphumo ezikhawulezayo nezisebenzayo zexesha elide
I-Semalt inamakhulu abathengi abonelisekileyo
Ukususela ngo-2013, zonke izinto esizenzayo zijolise ekuphuculeni imisebenzi ekwi-intanethi yabathengi bethu. Siyazingca ngokuba yinxalenye yempumelelo yabo. Fumanisa apha ukoneliseka kobuso babathengi bethu ngobungqina babo: +32 ividiyo yevidiyo, +146 ubungqina obubhaliweyo, kunye +
Nantsi eminye imizekelo
Unokuba ngomnye wabo bathengi banelisekileyo
Ewe kunjalo, ufuna ukuba ngomnye wabathengi abonelisekileyo, ngoko kunokwenzeka. I-Semalt ilungele ukuhamba nawe ukusuka kwindawo yakho yangoku ukuya kwindawo yakho kwi-10 ephezulu yeenjini yokukhangela zikaGoogle. Le yimeko, umzekelo, noMnu Greta, u-CEO we-Zaodrasle, okhule ngokubonakalayo kwiinkonzo ze-SEO ze-Semalt. Nantsi into awayithethayo malunga namava akhe noSemalt: "Inkonzo enhle kakhulu! Ndonelisekile, ii-organic hits ziyanda; amagama amaninzi aphambili akwi-10. U-Ivan Konovalov ngumphathi omkhulu, uzama kakhulu, ndazama abanye ababini ngaphambili yena, kwaye bebengalunganga. »
Ngaphantsi nje kweenyanga ezi-5 zomkhankaso we-SEO, sikwazile ukugcina inkqubela phambili kunye nokuqinisekisa ukuba iZaodrasle inokufumana indawo kuGoogle TOP-5 nakwi TOP-3. Cofa apha ukuze ubone iziphumo:
Ke ukuba unomdla kwezi ziphumo, ungandwendwela indawo yethu kwaye ufumane ulwazi oluninzi malunga nabathengi bethu. Amacala anokufumaneka apha.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uSemalt yinkampani enamava engaphezu kweminyaka eli-16 yamava e-SEO kunye neqela leengcali ezingaphezulu kwe-120. Ke sihlala sinxibelelana nabathengi bethu ukuba baphendule ngokuzenzekelayo kuyo nayiphi na imfuno evela kubo. Ke, kwiwebhusayithi yethu, ungadibana neqela lethu nangaliphi na ixesha.
Akukho sithintelo kulwimi kunye noSemalt
Akukho sithintelo kulwimi, kuba akunandaba nokuba uthetha luphi ulwimi, abaphathi bethu ngokuqinisekileyo baya kufumana ulwimi oluqhelekileyo kunye nawe. Emva kwayo yonke loo nto, sithetha isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, iTurkey, kunye nezinye iilwimi ezininzi.
Inyaniso enomdla malunga neSemalt okanye ibali leTurbo
Ngo-2014 besifudukela kwi-ofisi entsha kwaye sayifumana kwimbiza endala yeentyatyambo. Umnini-ofisi wangaphambili wamshiya akavuma ukuthatha. Siwushiyele ufudo sisiya kuye sambiza kamva nguTurbo. Sifumene indlela yokondla kunye nokunyamekela iifudu, kwaye isilwanyana sethu esitsha seofisi safudukela kwi-aquarium enkulu ebanzi. Ukusukela ngoko, waba yimascot yethu.